G6-C00 Auto Root & Myanmar Font Installer ~ သား​ကောင်းရတနာ(နည်းပညာ)
Font Flash Zip များ
4/23/2014 BOOTLOADER UNLOCK လုပ်နည်းများ, FONT များ, Huawei ဆိုင်ရာများ, Jailbreak လုပ်နည်းနဲ့ Tool များ, ROOT TOOL4comments
G6-C00 ကို တစ်ခါထဲ မြန်မာဖောင့်,UnlockBootloader,Root
Access အစရှိတာတွေကိုတစ်ခါထဲထည့်ပေးသွားမှာပါ။ Tool ထဲမှာ Instruction
ဒီ Tool ကို ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
Developed By Phyo Chan
moeoo khin7September 2014 at 00:00
ဒီtoolကို downပြီး comနဲ့ runလိုက်​ယုံပဲလားဗျ။ pdf​ရောပါလားဗျ
moeoo khin7September 2014 at 00:03
ဒီtoolကို downပြီးရင်​ com မှာ ဘယ်​​နေရာထားပြီး run​ပေးရမလဲဗျ။ တခြားဟာ​တွေ​ရော downစရာ မလို​တော့ဘူးလားဗျ
Atif Sagar9November 2014 at 23:06
BootLoader Unlocked Code က တောင်းလို့ မရဘူး ။
koko sonay 12 September 2015 at 23:26
အကို ကျွန်တော်ကဆားဗစ်သမားတစ်ယောက်ပါ bootloader unlock နဲ့ပက်သက်ပြီး သေချာလေး သိချင်ပါတယ် နေတာကတော့ မူဆယ်မှာပါ unlock code emui ကို mail နဲ့လွယ်လွယ်လျှောက်လိုက်တာ (အပြု)ချက်ချင်းရောက်လာပါတယ် တစ်ကယ်လို တော့ အခုထိတိုင်ပတ်နေပါတယ် တရုတ်ဆိုဒ်အကောင့်နဲ့ en ဆိုဒ်ကို ဝင်ဘို့ ရပါသလား သေချာလေးရှင်းပြပေးပါ ဖြစ်နိုင်ရင်မေးလ်ကနေပို့ ပေးစေချင်ပါတယ်
from. . . kokosonay@gmail.com
Facebook မှာဖတ်မယ်ဆို Like ထားပါ။
Zawgyi Font For Windows 7/8
IDM Full Version ဒေါင်းယူရန်
Huawei Honor 3C 4G H30-L02 - V 4.4.2 Official Firmware များ
Huawei Honor 3C 4G H30-L02 KitKat Official Firmware များ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။(တင်နည်း) ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Firmware file ကို zip ဖြည်ပါ။ဖိုင်ထ...
H30-U10 ( China ) အလုံးများ Firmware စမ်းရင်း IMEI Null သွားသူများ
အခုကျတော့ ဖုန်းက IMEI လေး Backup ထုတ်ပီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် - အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ MTK Droid လေးကို အသုံးပြုပီး IMEI လေး Rest...
Huawei Y535D-C00 USB Upgrade
၁.HW OneKeyDownLoad V1.0.6 tool ကိုဖွင့်လိုက်ပါ. ၂.phone ကို battery တပ်ပီးကြိုးထိုးပါ ၃.computer တွင် driver သိပီး tool တွင်လ...
Huawei ဖုန်းများ bootloader unlock Code တောင်းနည်း
Huawei ဖုန်းများကို bootloader unlock တောင်းနည်းကို မသိသေးသူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ် code တောင်းနည်းကို ပုံလေးတွေနဲ့ ရ...
Huawei C8816 & C8816D တွေအတွက် Firmware မတက်တာတွေ, install လုပ်မရတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမဲ့ Tool
Huawei C8816 & C8816D တွေမှာ Firmware Install မတက်တော့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Firmware Install လုပ်မရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ Tool ဖြစ်ပါ...
Samsung Galaxy Note3SM-N900မှာ Rootမချိုးဘဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
Samsung Galaxy Note3မှာ Root မချိုးဘဲမြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်သူတွေ အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ပြီ ဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို တင်...
SONY XPERIA C ကို Firmware တင်ခြင်း(Flash Tool နဲ့တင်၍မရ)
(အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့်Firmware တင်ရန်လိုအပ်နေသူများအတွက်) Sony Xperia C သည် အခြား Xperia ဖုန်းတွေလို Flash Tool နဲ့ တင်လို့မရပါ။...
Frozen Zawgyi Keyboard Pro Crack version
ဒီ Frozen Zawgyi Keyboard Pro ကတော့ Crack version ဖြစ်ပါတယ် သုံးရတာ လွယ်ကူပြီးအသုံးပြုလို့လဲကောင်းပါတယ် crack ထားတဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ expir...
Huawei C8816D ဖုန်းများအတွက်( Bootloader Unlock, Root , Network Unlock ,Myanmar Font ,) One Click Tool Installer
Huawei C8816D ဖုန်းများအတွက် One Click Batch Tool တစ်ခုလာပါပြီ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Bootloader Unlock , Root , Network Unlock , နဲ့ Mya...
iOS Firmwares များဒေါင်းယူရန်
ADB Cleaner Sorftware
Android BOOTLOOP ERROR FIX
Android Internal Memory ထပ်တိုးနည်း
ASUS Fonepad Firmware များ
Backup Tool များ
Bootloader Checker Tool
BOOTLOADER UNLOCK လုပ်နည်းများ
Build in Myanmar စနစ်ဆိုင်ရာ
Clone Firmware များ
Converter and Format
Factory Mode Remover Tool
flashtool error 2004 repair
Gapp Installer Tool များ
Gionee Smartphone Rom များစုစည်းမှု
Huawei Root မလိုတဲ့ Font-Installer များ
Huawei Step2Fail error
IMEI Fix Tool များ
Jailbreak လုပ်နည်းနဲ့ Tool များ
MM Font Flash Zip များ
MM Font Tool
Music Mp3 အခွေများ
Myanmar Font ထည့်နည်း
not registered on network error
Password Remove Sorftware
PhotoShop Design များ
Sony Model Checker
USB Driver များ
Video eiditor Apk များ
Wifi Key ပြန်ကြည့်နည်း
Zapya For Pc & Android
တရားဆိုင်ရာ Apk များ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုဒ်များသို့➳<!- -> သိသင့်သောဆေးပညာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မြန့်မာ့ဆေးမြီးတို burmese classic
တရားဓမ္မဆိုင်ရာဆိုဒ်များသို့➳<!- -> မေတ္တာရိပ ၀ီရဓမ္မ အရှင်ဝိစက္ခဏ(ဇယရံသီ) ဓမ္မလရိပ်
သတင်းဆိုဒ်များသို့➳<!- -> မဇ္စျိမ ဧရာဝတီ ဗွီအိုအေ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA သစ်ထူးလွင်
Blog Archive 12/29 - 01/05 (28) 01/19 - 01/26 (20) 01/26 - 02/02 (1) 02/09 - 02/16 (23) 02/16 - 02/23 (18) 02/23 - 03/02 (13) 03/02 - 03/09 (3) 03/16 - 03/23 (30) 03/23 - 03/30 (11) 04/06 - 04/13 (3) 04/13 - 04/20 (15) 04/20 - 04/27 (18) 04/27 - 05/04 (25) 05/04 - 05/11 (13) 05/11 - 05/18 (28) 05/18 - 05/25 (18) 05/25 - 06/01 (17) 06/01 - 06/08 (15) 06/08 - 06/15 (12) 06/15 - 06/22 (16) 06/22 - 06/29 (14) 06/29 - 07/06 (20) 07/06 - 07/13 (9) 07/13 - 07/20 (19) 07/20 - 07/27 (17) 07/27 - 08/03 (10) 08/31 - 09/07 (14) 09/07 - 09/14 (3) 09/14 - 09/21 (2) 09/28 - 10/05 (6) 10/05 - 10/12 (13) 10/12 - 10/19 (17) 10/19 - 10/26 (10) 10/26 - 11/02 (2) 11/02 - 11/09 (2) 11/09 - 11/16 (1) 11/16 - 11/23 (6) 12/21 - 12/28 (5) 12/28 - 01/04 (10) 01/04 - 01/11 (6) 01/11 - 01/18 (5) 01/18 - 01/25 (1) 01/25 - 02/01 (14) 02/01 - 02/08 (2) 02/08 - 02/15 (3) 02/15 - 02/22 (1) 11/29 - 12/06 (3)
Design by သားကောင်းရတနာ